Alaabada Apple | Xogta IPhone (Bogga 6)
Waxaan tijaabinay salka iyo bangiga korontada ee Choetech Apple Watch
Ragga ka socda Cupertino waxay hadda soo dhejiyeen afar koorso oo bilaash ah oo ku saabsan barnaamijka buugaagta si ay uga faa'iidaystaan ​​iPad-ka.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato baytariyada lithium ee diyaaradaha
Raadi haddii qalabka elektirooniggaagu buuxiyo shuruudaha lagu raacayo diyaaradda iyo sida iyo halka aad ku qaadanaysid.
Apple wuxuu sii daayaa watchOS 5.0.1 Apple Watch
watchOS 5.0.1 waa cusbooneysiin yar oo ka baxsan waxyaabaha caadiga ah ee hagaajiya dhowr arrimood oo ka yimid sii deyntii asalka ahayd (watchOS 5.0.0) ee usbuucii hore.
Cilad ku jirta iOS 12 waxay ka dhigeysaa codsiyo ka ballaaran kuwa ay dhab ahaan yihiin
Haddii aad rabto inaad ku raaxeysato ciyaarta ugu horreysa ee taxanaha Layton ee iPhone ama iPad mar labaad, ugu dambeyn waad sameyn kartaa.
Sida loogu qasbo barnaamijyada dhow ee watchOS 5
Sidii la filaayay, iPhone Xs cusub iyo iPhone XS Max waxay soo mareen tijaabooyin dhibic kala duwan iyo dheecaano iska caabin ah.
Apple wuxuu ururiyaa taxane ah dib u eegis warbaahineed oo kusaabsan Apple Watch Series 4
Baro kaydka ku yaal Apple Store ee iPhone XS cusub, XS Max iyo Apple Watch Series 4
Nidaamka cusub ee ku shaqeynaya saacadda Apple wuxuu la yimaadaa astaamo badan oo cusub, maaddaama aysan isku mid ahayn in loo arko sida loo sheegayo, waxaan kuu daayey fiidiyowgeena.
Nooca ugu dambeeya ee tvOS 12, oo hadda la heli karo, wuxuu na siinayaa iswaafajin Dolby Atmos iyo waraaqo cusub oo cusub
Nooca ugu dambeeya ee tvOS 12 ayaa hadda loo heli karaa dhammaan jiilka 4aad iyo 5aad ee isticmaalayaasha TV-ga Apple gabi ahaanba waa lacag la’aan.
Xilli ciyaareed kubadeed cusub iyo cusbooneysiin cusub oo ku saabsan barnaamijka LaLiga
WatchOS 5 waxay la timid war xiiso leh Apple Watch
Apple wuxuu bilaabayaa watchOS 5, oo ah nidaamka cusub ee hawlgalka ee loogu talagalay Apple Watch kaas oo keena taxane wanaagsan oo astaamo cusub saacadaheena.
Apple Watch wuxuu qiyaasi karaa dhiig karka mustaqbalka
Kaddib layaabkii Apple Watch ee awood u lahaa inuu sameeyo ECG, hadda waxaa jira fikrado Apple Watch ah oo awood u leh cabbirka cadaadiska dhiigga.
Dhammaan wixii ku saabsan electrocardiograph-ka taxanaha Apple Watch 4
Mid ka mid ah riwaayadaha cusub ee ay keento ayaa ah awooda lagu sameeyo electrocardiogram wax walbana waan kuu sharxeynaa si aadan u jahwareerin.
Shaqada ECG ee Apple Watch Series 4 ayaa ku xaddidan Mareykanka xilligan
Apple wuxuu ka tagayaa noocyada daabacaadda ee Apple Watch
Markii la bilaabay Apple Watch, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa suuqa kala baxday moodelkii lagu sameeyay kiiska dhoobada, kaas oo ku dhex jiray qaybta daabacaadda.
Qiimaha, qeexitaanka iyo helitaanka taxanaha cusub ee Apple Watch 4
Kani waa muraayadda hore ee Apple Watch Series 4 cusub
Taxanaha Apple Watch 4 wuxuu la yimid cabbir ka ballaaran: 40 iyo 44 mm
Bisha November ee soo socota, Apple wuxuu furi doonaa Apple Store cusub oo ku yaal Paris, gaar ahaan Champs Elysees oo ku yaal Paris.
Tani waa war si toos ah uga imanaya nooca beta ee watchos 5, waana in horumariyayaashu ...
Sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay, Apple Watch Series 4 wuxuu xallin lahaa 384x480, oo ka sarreeya kan illaa hadda la arkay.
Tani runti faa iido ayey u yeelan kartaa inbadan oo adeegsadayaasha ah oo inta badan isticmaala Khariidadaha Google si ay ugu lugeeyaan lugo ama ...
Habka had iyo jeer-on oo naga badbaadiya tilmaamaha curcurka si loo hubiyo waqtiga ayaa hubaal u imaan kara Apple Watch ee 2018.
Ma aha codsi aan si toos ah uga helno App Store - oo sidoo kale ka mid ah ...
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Telegram waxay ku dareysaa muuqaal cusub oo xiiso leh adeegsadayaasha barnaamijka. Waxay ku saabsan tahay…
Bishii Agoosto ee la soo dhaafay, waxay ahayd bil ka buuxsan betas, wax aan u yeerin feejignaanteena maaddaama ay tahay bisha sanadka ee ay Apple leedahay in Ragga ka imanaya Cupertino ay hadda sameeyeen beta tobnaad oo ay heli karaan kuwa horumariya ee watchOS 5.
Netflix waxay dooneysaa inay joojiso bixinta lacagta Apple ee ku saabsan adeegyadeeda iyada oo loo marayo App Store
Dhowr sano ka hor, raggii ka socday Cupertino waxay ku dhawaaqeen isbeddellada qaabka rukunka, tusaale ah, laga bilaabo sannadka labaad, wuxuu yareeyay tirada shirkadda weyn ee gantaalaha ayaa bilaabay inuu joojiyo u oggolaanshaha isticmaaleyaasha inay iska diiwaangeliyaan Netflix illaa App for macruufka.
La cusbooneysiiyay. Ugu dambeyntii maanta Ciyaaraha Epic ayaa beeniyay warkan ku saabsan imaatinka suurtagalka ah ee ciyaarta ee tvOS oo caddeeyay inay tahay ...
Dhowr isticmaale ayaa wali isticmaalaya noocii hore ee Tweetbot, sidee u sameeyaan?
Waa hagaag, way fududahay, badankoodna adeegsadayaashani waxay leeyihiin cusbooneysiin otomaatig ah oo ku kaydsan App Store ...
Markii codsiga Snapchat ama shabakada bulshada ku soo degto iPhone-ka waxay ahayd kacaan dhab ah iyo miirayaasheeda oo ay la socdaan qaar ...
Apple waxay dhiirrigelisaa Apple Pay Cash inta laga sugayo guud ahaan soo saarista adduunka
Ragga ka socda Cupertino waxay dhiirrigeliyaan Apple Pay Cash oo na tusaysa sida ay u fududahay uguna fudud tahay inay lacag ugu wareejiso saaxiibbadeen.
Apple waxay ka shaqeyneysaa sidii loo yareyn lahaa spam-jebinta aan kala joogsiga laheyn ee dadka isticmaala Fariimaha ay ka helaan Shiinaha
Markuu barnaamijku caan noqdo, ma sahlana oo keliya xiriirka u dhexeeya dadka isticmaala, laakiin sidoo kale wuxuu noqdaa ...
Barnaamijyada IOS mar dambe qayb kama noqon doonaan barnaamijka ku xiran iTunes
Inta badan dukaamada internetka ayaa bixiya barnaamij gacansaar ah kaas oo shirkadaha ama dadka ay ku jiraan isku xirnaanta shey ay ka helaan Apple ay qoraal ugu direen isticmaaleyaasha barnaamijka isku xirnaanta Apple kaas oo ay ku sheegeen in laga bilaabo 2018, barnaamijyada iyo iibsigooda abka App Store iyo Mac App Store qayb kama noqon doonaan barnaamijkan.
IOS 12 Beta 5 waxay na tusaysaa sawiro cusub oo ah sanduuqa lacag bixinta ee AirPods cusub
Siyaasadda ay Apple qaadatay sannadihii la soo dhaafay ee ay ku soo bandhigaysay alaabteeda cusub dhawr bilood ka hor imaatinkooda dukaamada, ayaa sababaya sanduuqa lacag-bixinta wireless-ka ayaa mar kale ka soo muuqanaya koodhka beta-kii ugu dambeeyay ee la heli karo ee iOS 12.
Marka ay jiraan wax ka yar laba bilood si aan u aragno jiilka soo socda ee iPhone, ragga ka socda Cupertino, ayaa bilaabay mashiinka Apple wuxuu na siinayaa ogeysiis cusub oo aan ku arki karno awoodda ay bixiso processor A11 Bionic
Apple ayaa sawir ka qaadi laheyd Mareykanka oo dhan iyo adduunka badhkiis oo loogu talagalay Muuqaalka Wadada
Iyadoo la tixraacayo bilaabista rasmiga ah ee iOS 12, Apple wuxuu haysan doonaa macluumaad sawir ah oo ka socda adduunka badhkiis si uu u abuuro muuqaalkiisa waddada u gaarka ah khariidadaha Apple.
Saamiga suuqa ee Apple Watch ayaa hoos u dhacaya, in kasta oo tirada shixnaddu ay kordhayso
Apple Watch waxay xaqiijisay, rubuc kale, inay tahay aaladda curcurka ugu iibinta badan adduunka, in kasta oo ay xaqiiq tahay in shirkadda fadhigeedu yahay Sida laga soo xigtay shirkadda falanqaynta ee Canalys, tirada unugyada Apple Watch ee ay u dirtay iibkeeda. , ayaa in ka badan labanlaabmay, laakiin saamigii suuqa ayaa yaraaday
Kani waa Apple Piazza Liberty cusub, Apple Store cusub oo cajiib ah oo ku yaal Milan
Apple waxay daabacdaa sawirradii rasmiga ahaa ee ugu horreeyay ee Apple Piazza Liberty cusub, oo ka mid ah kuwa ugu quruxda badan Apple Stores ee aan aragnay.
Barnaamijka Nike Training Club ayaa si rasmi ah ugu yimid Apple Watch
Codsiga Naadiga Tababarka ee Nike ayaa muddo dheer laga heli jiray taleefannada iPhone-ka ah iyo tan iyo shalay sidoo kale ...
Barnaamijka Xayeysiiska Raadinta, ee loogu talagalay horumariyeyaasha inay ku xayeysiiyaan barnaamijyadooda, oo hadda laga helo Spain iyo dalal badan
Ilaa hadda, App Store wuxuu na siiyaa ku dhowaad 2 milyan oo codsiyo ah noocyo kala duwan, codsiyada isku dayaya inay soo qabtaan dareenkeenna, laakiin mid ka mid ah nidaamka ogeysiiska loogu talagalay horumarinta ee App Store, ayaa hadda ballaariyay tirada waddamada u dhexeeya kuwa la heli karo , Spain oo ka mid ah.
Caqabadaha cusub ee ku saabsan Apple Watch munaasabadda Maalinta Isboortiga Qaranka ee Shiinaha
Ciyaaraha (ama jirdhiska) maalinta ayaa ku soo wajahan Shiinaha, Applena waxay si la mid ah u soo saartay caqabado firfircoon oo cusub si loo xuso xilligan.
Xanta xagaaga ee horeyba u jirtay waxay noo keeneysaa fikrad ah Apple Watch Series 4
Waxay bilaabaan fiidiyow ururiya dhammaan wararka xanta ah ee suurtagalka ah ee 'Apple Watch Series 4' oo aan ku arki doonno bandhigga bisha Sebtember.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan aragnay sida ragga ka socda Cupertino ay u bilaabeen inay dayactiraan qaar ka mid ah dukaamada ugu da'da weyn, oo ay ku jiraan kuwii ugu da'da weynaa 26-kii Luulyo, Apple waxay furi doontaa Apple Store cusub oo astaan ​​u ah bartamaha magaalada Milano iyadoo leh qaab gebi ahaanba ka duwan kan. ilaa hada loo yaqaan
Apple waxay sameysaa codsiyo kala duwan oo ay heli karaan horumariyeyaashu si ay wax u qaban karaan, ma ahan oo keliya la socoshada codsiyada ay hayaan App Store Connect iyo codsiyada TestFlight waxay heleen casriyeynno kala duwan si loo ballaariyo tirada adeegyada ay u fidiyaan horumariyeyaasha
"Xidho siddooyinkaga" saddex ogeysiis oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch
Ragga ka socda Cupertino ma nasanayaan xagaagan, waxayna na tusayaan olole xayaysiis cusub oo loogu talagalay mid ka mid ah ...
Fadlan ka dhig mid cusub Apple Watch Series 4
Kuweena ku jira xaalada "sugitaanka" si ay u iibsadaan Apple Watch Series 4 cusub ka dib markii ay u dulqaateen ...
"Dukaanka App wuxuu noqonayaa 10", maqaalka Apple
Dukaanka App ayaa jirsaday toban sano Apple ayaa daabacday maqaal ay ku xusayso wax kasta oo tobanaankan sano loola dan lahaa iyaga iyo adduunkaba.
Twitterrific wuxuu lumiyaa ogeysiisyada riixitaanka iyo barnaamijka Apple Watch, iyo waxyaabo kale ...
Nooca cusub ee caanka ah ee caanka ah ee Twitter-ka ama macmiilka, Twitterrific, ayaa loo cusbooneysiiyay nooca 5.20 oo leh warar muhiim ah ...
Caqli ahaan xilligan ma jiraan wax laga qoray suurtagalnimada in Apple Watch oo leh LTE isku xirnaanta wiilasha ...
Taxanaheyga 'Apple Watch' 0 wuxuu lumiyaa isku xirnaanshahooda si fudud marka loo eego watchOS 4.3.1
Tani kuma dhici karto qof walba, laakiin taxanaheyga 'Apple Watch Series 0' ayaa lumiya xiriirka ...
Chirp waa macmiil cusub oo Twitter ah oo lagu rakibo Apple Watch-kaaga. Waa bilaash oo gebi ahaanba waa hooyo.
Barxadda Xayeysiiska Raadinta si loogu dhiirrigeliyo codsiyada ku jira App Store waxay imaan doontaa xagaaga kadib waddamo cusub, oo ay ku jiraan Spain.
Apple wuxuu ballaariyaa garoonka diyaaradaha iyo xarunta wax ka iibsiga ee macluumaadka gudaha iyada oo loo marayo maps Apple
Shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ayaa hadda ballaarisay tirada garoomada diyaaradaha iyo xarumaha wax laga iibsado oo ay ku siiso macluumaad ku saabsan gudaha.
Codsiga La Liga waa la cusbooneysiiyay si loogu bixiyo Koobka Adduunka
Xaqiiqdii dhamaan inta taageerayaasha kubada cagta leh waxay leeyihiin codsi rasmi ah oo La Liga ah oo lagu rakibay iphone-kooda iyo…
Imtixaanka xawaaraha ee u dhexeeya macruufka 12 iyo iOS 11.4 ee iPhone 5s iyo iPhone 8
Hal maalin ka dib markii la soo saaray beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12, YouTube-ka waxaan durba ka heli karnaa isbarbardhigyo kala duwan beta-kii ugu horreeyay ee iOS 12 iyo nooca ugu dambeeyay ee calaamadaha Apple ee iOS 11 ee iPhone 5s iyo iPhone 8.
Loolan-xiritaanka wicitaanka loogu talagalay horumariyeyaasha ka qaybgalaya WWDC
Apple waxay muddo dheer ku adkeysaneysay inay ku dhiirrigeliso dadka isticmaala inay jimicsi jimicsi sameeyaan maanta ...
Ragga ka socda Cupertino waxay ka faa'iideysteen maalinta kadib markii la sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS, watchOS iyo tvOS, si ay u bilaabaan beta-kii ugu horreeyay ee loogu talagalay horumariyeyaasha nidaamka Apple TV iyo Apple Watch.
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Gene Munster, Apple wuxuu soo bandhigi karaa afhayeen cusub oo caqli-gal ah oo ka hooseeya sumadda Beats ee WWDC, iyadoo Siri lagu qiimeeyo $ 250.
30-ka Juun Apple waxay xiri doontaa Apple Store The Pier oo ku taal Atlantic City
Dukaanka Apple ee ku yaal Atlantic City wuxuu albaabada u laabi doonaa si rasmi ah bisha Juun 30, sababtoo ah hoos u dhaca tirada dadka soo booqda iyo dalxiisayaasha booqda aagga uu wali furan yahay.
Marka loo eego Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah, HomePod ayaa la iibiyay inta lagu gudajiray rubucii ugu horreeyay ee 2018, wax ka badan 600.000 oo unug adduunka oo idil, saddexda waddan ee laga heli karo.
Logitech Crayon, qalin qaali ah oo Apple ah, ayaa durba laga heli karaa suuqa, in kastoo aadan awoodin inaad iibsato
Laba bilood ka hor jadwalka, Logitech wuxuu ku dhawaaqay helitaanka Logitech Crayon, Qalinka Apple ee raqiiska ah ee la jaan qaadaya kaliya iPad-ka 2018 isla markaana ay heli karaan iskuuladu.
Horumariyayaashu aad ayey ugu faraxsan yihiin naqshadaynta App Store ee iOS 11
Naqshadaynta App Store ee lagu soo rogay iOS 11 waxay ahayd isbedel wanaagsan. Tan iyo markii la bilaabay, tirada soo dejinta ayaa sii kordheysay bil kasta, marka lagu daro, horumariyayaashu waxay arkayaan in Apple ay fiiro gaar ah u leedahay iyaga.
Gaston D'Aquino waa isticmaale cusub oo Apple Watch ah oo lagu badbaadiyey smartwatch-ka geerida qaarkood. Waxaan kuu sheegeynaa sheekadiisa iyo sida uu warqad ugu diray Tim Cook
Patent cusub oo ka socda Apple wuxuu albaabka u furayaa suurtagalnimada wareegga Apple Watch mustaqbalka
Laga bilaabo Julaay, dhammaan barnaamijyada cusub waa in lagu hagaajiyaa iPhone X
Laga bilaabo bisha Luulyo ee sanadkan, dhammaan codsiyada cusub ee imanaya App Store waa in lagu abuuray iOS 11 SDK, si loo muujiyo iswaafajinta heerka iyo shaashadda Super Retina ee iPhone X
Waxaa xusid mudan, waxay fududeyneysaa xog aruurinta udhaxeysa dhaqtarka iyo bukaanka
Faa'iidooyinka haysashada Apple Watch ee curcurkaaga way badan yihiin mana ku ekaadaan kaliya ogeysiisyada ...
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 11.3
Ragga ka socda Cupertino waxay joojiyeen saxiixa macruufka 11.3, markaa haddii aan dhibaato ku qabno aaladdayada, waxaan hoos ugu dhigi karnaa oo keliya iOS 11.3.1
Apple Watch wuxuu ku darayaa nolol kale oo la badbaadiyey. Xaaladdan oo kale, gabadh 18 jir ah oo reer Florida ah
Waxaa jira warar dhowr ah oo laxiriira Apple Watch iyo badbaadinta nolosha dadka, mararka qaar mahad ...
Saddex waddan oo kale ayaa ku biiraya Apple Pay sannadkan: Norway, Poland iyo Ukraine
Ballaarinta Apple Pay waa mid isdaba joog ah oo intii waddankeennu joogay maalmo ka hor ay ...
Apple wuxuu ku shaqeyn karaa muraayadaha dhabta ah ee dhabta ah oo leh laba shaashadood oo 8k ah
Xanta ugu dambeysa ee laxiriirta qorshayaasha mustaqbalka ee Apple ee xaqiiqada dhabta ah iyo kuwa soo kordhay waxay ina tuseysaa muraayadaha isku dhafan lahaa 2 8k shaashad, mashruuc lagu magacaabo T288 oo arki lahaa iftiinka maalinta ee 2020
Intel ayaa mas'uul ka noqon doona keenista Apple oo 70% ka mid ah qalabka 'LTE' ee iPhone-ka soo socda
Sannadkan, joogitaanka 'Intel's LTE chips' ee iPhone-ka ayaa kor u kici doona ilaa 70%, taasoo sii yareyn doonta boqolkiiba inta ay bixiso Qualcomm.
Apple waxay joojineysaa iibinta AirPort Extreme, AirPort Express iyo AirPort Time maadaama ay kaydka dhamaadeen
Apple waxay si rasmi ah u shaacisay inay joojinayso iibinta alaabada kala duwan ee AirPort marka la iibiyo unugyada wali keydka ku jira, sidaa darteed ma cusbooneysiin doonaan qadka alaabtan.
Codsiga si loo maareeyo qayb ka mid ah waxyaabaha ku jira iPhone-ka, iPad-ka ama iPod taabashada ayaa hadda laga heli karaa Microsoft Store
Iyadoo fikradda ah in la sii wado hagaajinta adeegga Khariidadaha Apple, wiilashii Cupertino waxay ku darsadeen goobta saddex garoon diyaaradeed oo caalami ah.
BBVA iyo BancaMarch ayaa laga heli karaa goor dhow Apple Pay
Shaki badan kadib in uu imaan doono, BBVA ayaa ugu dambeyn laga heli doonaa Apple Pay. BancaMarch ayaa sidoo kale lagu daray "si dhakhso ah ayaa loo heli karaa".
Apple Watch Taxanaha 3 LTE ma sameeyaa shirkadda Verizon
Kordhinta hawl wadeenada taleefanka maalmahan dambe kuma xirna oo keliya qalabka moobiilka ee ay iibiso ...
Ka hel qiimo dhimis illaa 60% ah alaabada Apple dhammaadka wiigga eBay
EBay Super Weekend wuxuu ku soo laabanayaa dagaalka iyadoo qiimo dhimis lagu sameeyay ilaa 60% qalabka elektarooniga ah ee noocyada oo dhan, gaar ahaan Apple
McDonalds iyo Apple Pay waxay wadaagaan inay siiyaan baradho bilaash ah macaamiishooda
Dhiirrigelinta Apple ee silsiladda cuntada degdegga ah ee McDonalds aad uma badna, in kasta oo ay run tahay in ...
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaa jira kiisas qaar ka mid ah dadka isticmaala Apple Watch ee ogaaday in shaashadda ...
Wiilasha Cupertino waxay nagu dhiiri gelinayaan inaan sii wadno sameynta isboortiga munaasabada maalinta xigta ee Dhulka oo dunida oo dhan looga dabaaldego 22-ka Abriil.
Apple waxay diyaarineysaa la qabsiga "Aasaaska" shaqada mustaqbalka ee Isaac Asimov
Ragga ka socda Cupertino waxay iibsadaan xuquuqda Fundación, oo ah shaqada mustaqbalka ee halyeeyga Isaac Asimov. La qabsi la leh is yeelyeelid weyn oo loogu talagalay adeegga mustaqbalka ee fiidiyowga ee qulqulka Apple.
Banco Santander wuxuu sii wadaa inuu sharad ku galo Apple Pay wuxuuna hagaajiyaa codsigiisa
Ugu dambayntii waxaa jira tujaabooyin loo maro hawlgallada iyo aaladaha loo adeegsado arjiga Banco Santander, aan eegno waxa cusub.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegayaa sida loo daarto Apple Watch oo tusay tufaaxa Apple si aan xad lahayn.
Apple waxay ku dhiirigelineysaa Apple Pay 4 XNUMX fiidiyow oo cusub oo iPhone X ah
Apple waxay dooneysaa inay dhiirrigeliso isticmaalka Apple Pay iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo marka loo eego iPhone X iyo Face ID. Tan darteed wuxuu ku daabacay afar fiidyow bartiisa Youtube
Brazil waxay horey u haysatay Apple Pay oo la heli karo
Warka ku saabsan habka lacag bixinta Apple, Apple Pay, ma joojinayo imaatinkiisa kiiskan waxaan la hadlaynaa ...
Instagram loogu talagalay Apple Watch ayaa ku baaba'ay istaroog
Ha baqin, runtii Instagram-ka ayaa ku lumay istaroog ku jira noocyadeeda loogu talagalay daawashada caqliga badan ee shirkadda Cupertino.
Waxaa jira hadal badan oo ah in Apple Watch soo socda ay ku dari karto mitirka gulukoosta dhiigga, wax aan aad ugu badnayn mustaqbalka dhow.
Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Ming-Chi Kuo, jiilka afraad ee Apple Watch, Taxanaha 4, wuxuu arki doonaa cabirka shaashadiisa oo kordhay 15%.
Farqiga u dhexeeya iPad-ka 2017 iyo iPad-ka cusub ee 2018
Waxaan kuu soo qaadaneynaa isbarbardhiga u dhexeeya iPad 2017 iyo iPad-ka cusub ee 2018 si aad u tixgeliso waxa ka dhigaya in mid iPad ka duwan kan kale oo aad si sax ah u doorato.
Kiiboodhka sixirka iyo jiirka sixirka ah ee cirifka bannaan ayaa la iibinayaa
Dhacdadii Apple ee galabta lagu qabtay Chicago waxay nooga tagtay warkii iPad-ka cusub qiime ...
IPad cusub 2018, ka awood badan, karti badan oo hadda ka jaban
Aynu eegno iPad-ka cusub ee 2018, oo la shaqeyn kara qalinka Apple iyo qiime aan waligiis hore loogu arag noocyadan kala duwan.
Sida loogu beddelo dhammaan qalabka Apple
Baro sida loogu beddelo dhammaan aaladaha Apple ee aad adigu leedahay. Marka waxaad yeelan kartaa wax walba oo abaabulan oo aadan ku jahwareerin aaladaha.
Guga sidoo kale wuxuu la yimaadaa Apple oo leh 24 xarig oo cusub oo loogu talagalay Apple Watch
Ragga ka socda Cupertino waxay rabaan inay ku soo dhoweeyaan guga gacmo wanaagsan oo xarig cusub ah ...
Apple wuxuu sii daayaa beta lixaad ee tvOS 11.3
Ragga ka socda Cupertino waxay sii daayeen beta-kii lixaad ee tvOS 11.3, beta lixaad ee nooca xiga ee nidaamka hawlgalka Apple ee Apple TV.
Orange hadda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku darto wax ka iibsiga App Store, iTunes, iBooks iyo Apple Music qaansheegadkaaga
Orange wuxuu ku biirayaa liiska hawlwadeenada macaamiisheeda Isbaanishka u oggolaanaya inay ku daraan qaan-sheegashada wadaha dhammaan iibsiyada loo maro iTunes, App Store, iBooks iyo Apple Music
Bankia iyo Sabadell, waxay horeyba uga soo muuqdeen liiska inay la jaan qaadayaan Apple Pay
Shaki la'aan, war aad u wanaagsan oo loogu talagalay macaamiisha Apple iyo kuwa labadan bangi ee waaweyn, Bankia iyo ...
Apple wuxuu furi doonaa Apple Store siddeedaad Japan gudaheeda Abriil 7
Bisha Abriil ee soo socota, gaar ahaan 7-da, ayaa ahayd maalintii ay Apple u dooratay in ay ka furato Dukaankii Apple ee siddeedaad ee dalka.
Amazon, maahan Apple, waxay noqon kartaa shirkadii ugu horeysay ee gaarto qiime dhan $ XNUMX bilyan oo saamiyadeed
Haddii Amazon ay sii wado isla heerka kobaca ee sanadkii la soo dhaafay, waxay noqon kartaa shirkaddii ugu horreysay ee dhaafta 1000 bilyan xaraf suuq ah
Dhowr saacadood ka dib markii la sii daayay beta lixaad ee iOS 11.3, shirkadda ku saleysan Cupertino ayaa soo saartay beta lixaad ee watchOS 4.3
Apple ayaa hakad gelin lahayd soo saarista iPhone 8 Plus adeegsiga qaybo aan la oggolayn
Warar xan ah oo kala duwan ayaa sheegaya in Apple ay dhibaato kala kulmi laheyd soo saarida iphone 8 Plus waxaana lagu qasbi lahaa in ay hakiso wax soo saarkeeda mudo labo todobaad ah.
Isticmaalka taxanaha 'Apple Watch Series 3' ayaa sii kordhaya, Taxanaha 0-na si aad ah ayuu hoos ugu dhacay
Ansixinta Apple Watch Series 3 ee ka soo horjeedka hoos u dhaca isticmaalka Apple Watch Series 0 ama sidoo kale ...
Mawduuc Youtube mugdi ah ayaa hadda laga heli karaa macruufka
Habka mugdiga ah ee Youtube ayaa hadda loo heli karaa dhammaan dadka isticmaala macruufka sida ku xusan wararka imanaya ...
Jedi-kii ugu dambeeyay ayaa horeyba loogu heli karaa amar hore iTunes, halka filimada kale, in kasta oo ay u muuqdaan, aysan iib aheyn.
Apple wuxuu noqonayaa nooca caanka ah ee millennials-ka
Daraasad ayaa la daabacay taas oo noocyada ugu caansan ee millennials, isticmaalayaasha u dhexeeya 20 iyo 30 sano jir, la falanqeynayo, iyo Apple waa nooca ay jecel yihiin.
Apple wuxuu sii daayaa beta-shanaad ee watchOS 4.3
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen beta-kii shanaad ee watchOS 4.3, beta oo noo keenaya warar taxane ah, oo u badan bilicsanaanta.
Xuquuqda dayactirka, biil bilawday sanadkii hore, ayaa sii xoogeysanaya waxaana hada jira 18 gobal oo ka fiirsanaya.
Android P horeyba wuxuu ugujiraa heerarkii ugu dambeeyay ee horumarintiisa waana tan sida nidaamka qalliinka ee Google uu qorsheynayo inuu ula qabsado dhammaan wixii "notch" ee jira.
Apple Ayaa Soo Saartay Filim Gaaban Oo Uu Hogaaminayo Spike Jonze Si Loogu Dhiiri Galiyo HomePod
Wiilasha Cupertino waxay sii daayaan muusig gaaban si ay ugu dhiirrigeliyaan HomePod oo uu agaasime ka yahay filim-sameeyaha caanka ah Spike Jonze.
Fikradda koowaad ee sawirrada dhagaha dhagaha ee Apple
Waxay umuuqataa in dhamaadka sanadkaan 2018, Apple ay bilaabi laheyd headset kaas oo si buuxda u galaya dhamaadka-sare ee qeybta. Fikradda koowaad ayaa hore loo abuuray
Haa, ha ku adkeysan in Telegram-ka uu shaqeynayo [La cusbooneysiiyay]
Waxay umuuqataa in arjiga Telegram iyo xitaa websaydhada arjiga fariimaha caanka ah ay hoos udhacday. Tan…
Loolan cusub oo xagga dhaqdhaqaaqa ah oo loogu talagalay Maalinta Haweenka Adduunka ee Maarso 8
Shaki la'aan, waxaan aragnaa sida saacadda Apple ay usii garaaceyso inta kale ee la tartameysa ee leh saacado caqli-gal ah, xitaa ...
AirPod-yada soo socda waxay lahaan doonaan dareemayaal lagu cabiro dhaqdhaqaaqa jirka
Shatiyado badan ayaa ka muuqda AirPod-yada cusub. Xaaladdan oo leh dareemayaal cusub oo naga caawin doona inaan ogaanno xaaladdeena jireed markasta
Wiilasha Cupertino waxay ku biirayaan dabaaldegga Maalinta Haweenka Adduunka oo leh dhacdooyin taxane ah oo ay abuureen iyo ka mid noqosho iyo kala duwanaansho, dhammaantoodna ay hoggaaminayeen haween.
Saxiixii ugu dambeeyay ee Apple si loo hagaajiyo shaqada sirdoonkeeda macmalka ah, iyo inta badan Siri, waa Michael Abbott, oo hore u ahaa injineer ka tirsan Twitter iyo Palm.
Daahfurka Apple Watch ayaa tusaale cad u ah sida Apple wax uga badali karto xeeladaha iibka qofka ...
Dhowr qof oo u ololeeya ayaa ku baaqaya qaadacaad ka dhan ah Apple iyadoo la adeegsanayo dalabka Ururka Qoryaha Qaranka
Dhowr atariishooyin Mareykan ah ayaa bilaabay inay codsadaan qaadacaad ka dhan ah Apple, ugu yaraan hal maalin, si looga saaro codsigan TV-ga Apple ururkan.
Waana in Apple ay diyaar u tahay nooca 4.2 ee watchOS API-yada cusub ee u oggolaanaya dadka isticmaala ...
Haa, waqti badan ayey ku qaateen inay sameeyaan laakiin ugu yaraan waxaan horey u dhihi karnaa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu fikirayo ...
Sida laga soo xigtay madaxa qaybta mobilada ee Samsung, suurtagalnimada soo saarista Samsung's HomePod ma imaaneyso illaa dhamaadka sanadka iyadoo xoogaa nasiib ah.
Shirkadda Cellebrite waxay ku andacooneysaa inay ku geli karto boosteejooyinka IOS 11
Shirkadda u heellan inay u fidiso adeegyadeeda marin u helka Apple iPhones, waxay awood u leedahay inay ku bixiso adeegyadeeda ku dhowaad dhammaan noocyada iOS 11 iyo qalab kasta.
Cusboonaysiintii ugu dambaysay ee hagaha amniga iOS ayaa ina tusaya sida shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino ay u adeegsanayso adeegyada keydinta daruuraha Google, marka lagu daro kuwa Microsoft iyo Amazon.
Kaydka HomePod wuxuu ka sarreeyaa dhammaan tartamayaasheeda marka laga reebo Amazon Echo Dot
HomePod wuxuu ku guuleystaa qori weyn oo bilaw ah isagoo dhaafaya tartamayaasha ugu waaweyn marka laga reebo Amazon Echo Dot.
Ka dib cabashooyinka isticmaalaha, YouTube loogu talagalay Apple TV waa la cusbooneysiiyay iyadoo lagu darayo aragtida rukunka
Ka dib cabashooyinka isticmaaleyaasha ee codsanaya shabakadda rukunka ee barnaamijka YouTube ee Apple TV mar labaad, YouTube ayaa dib u hagaajinaya oo ka dhigaya mar kale cusbooneysiin cusub.
Apple TV kii asalka ahaa ma awoodi doono inuu galo iTunes Store
Jiilka koowaad ee Apple TV mar dambe ma lahan doono taageero marin loogu helo iTunes Store. Tallaabadani waxay noqoneysaa mid wax ku ool ah, sababo la xiriira cusbooneysiinta amniga ee asalka Apple TV uusan awoodi doonin inuu helo.
Apple waxay uga tagtaa xogta adeegsadayaasheeda bariga wadanka gacanta dowladda Shiinaha marka ay isticmaaleyso server-yada ku yaal dhulkeeda
Sida laga soo xigtay allyst-ka caanka ah ee Min-Chi Kuo, Apple wuxuu ka shaqeynayaa sameecadaha dhagaha ee sanadkaan 2018. Waxay lahaan lahaayeen naqshad casri ah iyo tayo cod aad u fiican.
Lacagta Apple Pay Cash waxay imaan kartaa Isbayn hal daqiiqo ilaa daqiiqad kale
Calaamado dhowr ah oo lagu arkay shabakadaha bulshada ayaa ka digaya imaatinka Apple Pay Cash ee Spain, Ireland iyo Brazil.
Apple Pay waxay sii wadaa inay ku darto: in ka badan 127 milyan oo isticmaale firfircoon iyo in ka badan 2.700 oo bangi
Waxyaabaha ku saabsan Apple Pay waa run in dad badan aysan u aheyn sida ugu dhakhsaha badan sidii la filayay ...
Ragga ka socda Cupertino waxay u diyaariyeen horumariyeyaasha beta seddexaad ee nidaamka hawlgalka Apple ee Apple Watch.
Apple waxay la wareegtay qayb ka mid ah saamiga Samsung ee South Korea
Marka loo eego xogtii ugu dambeysay ee Istaraatiijiyadda Istaraatiijiyadda, Apple waxay ku guuleysatay inay qabsato qayb ka mid ah saamigii ay Samsung lumisay sanadkii la soo dhaafay.
Thanks to AirPods iyo iPhone X, Apple wuxuu noqdaa shirkadda ugu casrisan adduunka
Dhowr sano oo uu maqnaa ka dib, Apple waxay ku soo laabatay kaalinta ugu sarreysa shirkadaha ugu hal abuurka badan 2018.
Xalka giraanta cad ee uu ka tagay HomePod waa mid aad u fudud, sida ay sheegeen qaar ka mid ah injineerada warshadaha
Xalka xadka cad ee HomePod ka tagay ayaa ah in wax laga badalo walxaha ay isticmaalaan salka HomePod, mid la mid ah kii loo adeegsaday suumanka Apple Watch
Apple waxay cusbooneysiineysaa Carpool Karaoke xilli ciyaareedkii labaad
Apple wuxuu go'aansaday inuu cusbooneysiiyo James Corden fayraska iyo amaanta Carpool Karaoke xilli ciyaareed cusub oo cusub oo ku saabsan Apple Music.
Fiidiyowga cusub ee Apple wuxuu na tusayaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo HomePod
Ragga ka socda Cupertino ayaa soo duubay fiidiyow cusub oo aan ku arki karno waxa aan ku qaban karno iyo waxa aan ku sameyn karin HomePod.
Mid ka mid ah tartamayaasha tooska ah ee HomePod, Sonos One, ayaa sidoo kale calaamadda kaga taga alwaaxda sababo la xiriira gariirka hadalka, in kasta oo aad u garasho badan.
Apple waxay rabtaa inaan helno nolol sida ugu macquulsan uguna macquulsan, tan tan hada waxay abuureen qayb ka mid ah boggooda oo ay ku sharaxayaan wax walba oo ku saabsan farqiga dhaqdhaqaaqa ee Apple Watch.
Beerta Apple Park waxay leedahay cillad, cillad waxyeelo badan ...
Qaar ka mid ah shaqaalaha beerta cusub ee Apple Park ayaa ka cabanaya Apple Human Resources in ay jiraan shilal aan arag darbiyada dhalada ah ee dhismaha.
Twitter ayaa codsigeeda ka saareysa Mac App Store si joogto ah
Barta rasmiga ah ee Twitter-ka loogu talagalay Mac-ga ayaa si joogto ah looga saaray Mac App Store waxuuna shaqada joogsan doonaa 30 maalmood kadib.
Cusboonaysiinta ugu horreysa ee ugu weyn Shazam tan iyo markii la iibsaday Apple, waxay na siineysaa is-dhexgal isticmaale cusub iyo sidoo kale shaqooyin cusub
Dhammaan codsiyada cusub ee yimaada App Store laga bilaabo bisha Abriil, waa in lagu habeeyo haa ama haa qaabka shaashadda cusub ee iPhone X